Wifi को पासवर्ड चोरी भएर हैरान हुनुभयो, यसरि आफ्नो Wifi सिग्नल लुकाउनुस – Taja Media
के तपाईको वाइफाइ पासवर्ड चोरी भएर हैरान हुनु भयो ? अरूले तपाईंको पासवर्ड चोरेर इन्टरनेट चलाउछन ? आज हामी तपाईंलाई वाइफाइ लाइ कसरी सुरक्षित गर्ने बारे जानकारी दिनेछौं। वाइफ़ाइ पासवार्ड फेर्ने साथै वाइफाइ नेटवर्क नै लुकाउने तरिका सिकाउनेछौ ।
तपाईं सजिलै वाइफाइ नेटवर्कलाई लुकाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ Worldlink इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाइलाइ फाइदा जनक हुनेछ। तपाइँ मोबाइल एप्सको प्रयोग गरि आफ्नो वाइफ़ाइ टावर लुकाउन सक्नुहुन्छ। WiFi को टावर नै लुकाउनाले तपाइको वाइफ़ाइ पासवर्ड चोरी पनि हुदैन भने इन्टरनेट अरुले चलाउनै सक्दैन।
भिडियोमा पुरा विवरण हेर्नुहोस्
कसरी Worldlink पासवर्ड परिवर्तन गर्ने
वाईफाई लुकाउन वा वर्ल्डलिंक पासवर्ड परिवर्तन गर्न वर्ल्ड लिंकको एप्स मा जानुपर्छ । अब तपाई पासवर्ड परिबर्तनको बटन देख्नु हुन्छ। यदि तपाईं यहाँ आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् बटन क्लिक गरेर पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी वाइफाइ नेटवर्क लुकाउने
यदि तपाइँ वाईफाई नेटवर्क लुकाउन चाहानुहुन्छ भने तपाइँ वर्ल्डलिंकको एप्स भित्र जानु पर्ने हुन्छ। भित्र गएर Hide Network क्लिक सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा तपाइको वाइफाइ टावर लुक्नेछ, कसैले देख्न सक्दैन र चोरी पनि हुदैन ।
वाइफाइ लुकाउनु भन्दा पहिले, वाइफाइको नाम राम्रोसँग सम्झनुहोस् वा यसलाई कहिँ लेख्नुहोस्। वाइफाइ टावर लुकाएपछि इन्टरनेट कनेक्ट गर्न वाइफ़ाइ को नाम सर्च गरि जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसो गरेमा तपाइको वाइफ़ाइ अरुले चोर्ने असम्भब हुन्छ।
Previous Article सागर लम्साल ‘बले’ र रेश्मा घिमिरेको ‘तिमी बिजी टिकटकमा’ भिडियो सार्बजनिक ( भिडियो )
Next Article तपाईको मोवाइल हरायो ? यसरि पत्ता लगाउनुस
कङ्गनाकाे ट्विटर अकाउन्ट निलम्बनमा
प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओली (LIVE)
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले वितरण गर्यो सुरक्षाका सामाग्रीहरु
ग्लोबल आइएमई लघुवित्त र स्पर्स लघुवित्तको एकीकृत कारोबार सुरु
ग्लोवल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ले स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई प्राप्ती